PHLIZON CREE COB LED Kura Chiedza Chizere Spectrum China Manufacturer
Tsanangudzo:PHLIZON CIRATU LED Kuka Chiedza,CREE COB Kura Chiedza Chizere Spectrum,Phlizon CREE COB LED Plant Chiedza
 HomeProductsPH COB SeriesPH-B-L6PHLIZON CREE COB LED Kura Chiedza Chizere Spectrum
PHLIZON CREE COB LED Kura Chiedza Chizere Spectrum
Chaiyo Simba 630watt 3000W Phlizon CREE COB 3000W LED Chidyera Kura Chiedza Chizere Spectrum Indoor Plants Chiedza Kurera Veg Ruva REKUTI COB Kukura Chiedza.
Chiedza chinotaridzika zvikuru uye bvunzo dziri kunze kwekutaura wattage.
Ne3000w (chaiyo yakanyorwa se625-630w), mwenje wakaedzwa pa615w (mukati me3% yezvakataurwa), uye ne COB chete yakayedza pa 352w. Ini handina chokwadi chekuti ingati iyo simba rekudhirowa rinoshandiswa kune mafani, asi kusvika parizvino rinotaridzika sechiedza chikuru chemutengo. Ndichaenzanisa gohwo vs HPS uye CMH pakupera kweiri kukura uye kugadzirisa.
Phlizon inonyatso kuzivikanwa LED ikure mwenje kambani iyo inotengesa yakazara yakazara yechirimwa chirimwa matare. Iyi Phlizon 3000 watt COB inokura mwenje ndiyo yakasimba muenzaniso mune yavo COB LED inokura mwenje mhete.
Chiedza ichi chine masherufu epamusoro CIRO COB yakafukidzwa nemarata ekuwedzera anoonekwawo pane maviri ekutanga anokura mwenje mune ino chinyorwa. Iyo COBs inotsigirwa ne143 inotsigira LED chips inoisa iyi mwenje kumusoro kuti ive yakanyanya COB LED inokura mwenje pane
musika, zvese zvinotariswa.Chiedza chinodzorwa nema swithes maviri: Shanduko imwe ndeye Veg uye Bloom zvikamu, uye imwe switch yacho yakanyorwa yakasimba, iyo inodzvanya mwenje wako kuzere simba rekubhururuka.
Iyi 3000 watt COB LED inokura mwenje unoburitsa chiitiko chikuru icho chakanakira kune ese matanho ekukura kwezvirimwa. Iyo spectrum ine yakakwira bhuruu, huwandu hunofungidzirwa hwegirini wavelength iyo inosimudzira kukura kwechirimwa well, pamwe neizere tsvuku wavelength iyo
Phlizon inopa makore maviri waranti pane ino yekukura light.Takaverenga rese rese muridzi ongorora kunze uko, chete yaive nenyaya yaive yakafukidzwa newaranti. Vamwe vese vakagutsikana kwazvo uye vakanzwa sekunge vane mari zhinji. Chimwe chikonzero varidzi vanofarira kwazvo pamusoro peizvi Phlizon COB inokura mwenje ndeyekuti ivo vanopa toni yakakosha kune iyo inoburitsa. Iwe uri kuwana COB LED nemarenzi uye 2500+ PPFD yehafu mutengo wemhando dzinodhura dzemhando dzakawandisa nemateki akafanana.
Phlizon inonyanya kukoshesa LED inokura marambi emhando dzakasiyana dzakadai sekurapa, hurumende, uto, kutengesa, uye kurima.
Shenzhen Phlizon Technology Co, Ltd ndeye China yakavakirwa LED mwenje kambani yemakore. Isu tinovavarira kupa iyo yazvino teknolojia yeAKO uye isu takabatana nemamwe mazita makuru muindasitiri iyi. Isu takanzverwa, kugadziridzwa uye kugadzira LED inokura mwenje kwemakore, uye isu tiri kudhara mari inzvimbo nyowani muna 2018 yekudzora zvirinani LED yedu kukura mwenje mhando uye ive nechokwadi chekuti ivo vanogona kusangana neEC uye ETL standard. Nezvigadzirwa zvedu, isu tinokwanisa kuvandudza mashoma emagetsi, kupisa kunyura kupisa uye yakakwira PAR kuburitsa. Isu tinopa akasiyana siyana eULE anokura mwenje mhando dzevatengesi vanodyara, kudyara hobby lover etc. Iwo ma LED anokura mwenje vanoshandisa optimum kuonekera kuendesa mwenje izvo zvidyarwa zvinodiwa pasi pemasikati ezuva, kuitira kuti zvidyarwa zvikure zvinokurumidza, zvine hutano nemhando yepamusoro. Ndapota Don `T kuzeza kutaura nesu kana uine hombe kukura chiedza zvinodiwa.
Phlizon LED 3000W 6 COB LED Chiedza Bata Ikozvino
3000 Watt CREE COB LED Kura Chiedza Bata Ikozvino
COB LED Ikudza Mwenje Yekukura Kwemukati Bata Ikozvino
3000W COB LED Kura Chiedza Indoor Plants Bata Ikozvino
Cree Cob 3000w Yakatemwa Yakasimudza Chiedza Bata Ikozvino
3000W LED KUKURA ZVAKANAKA ZVAKANAKA SPECTRUM Bata Ikozvino
PHLIZON CREE COB LED Kura Chiedza Chizere Spectrum Bata Ikozvino
COB LED Kura Mwenje Cbx3590 cxa2530 Hydroponic Bata Ikozvino
PHLIZON CIRATU LED Kuka Chiedza
CREE COB Kura Chiedza Chizere Spectrum
IR LED Kukura Chiedza
4 Cob LED Kukura Chiedza